Faroole & Caalin oo Muqdisho ku sii jeeda xili lala sugayo furitaanka shirka – SBC
Faroole & Caalin oo Muqdisho ku sii jeeda xili lala sugayo furitaanka shirka
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Farooel & wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhaweyd ka dhoofay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal isagoo ku sii jeeda magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmayo shirka wadatashiga arimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha oo saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ayaa wuxuu sheegay in uu ku biirayo ergadii Puntland ee shaley gaartey magaalada Muqdisho isla markaana uu ka qayb galayo furitaanka shirka wadatashiga.
C/raxmaan Faroole wuxuu sheegay in shirkaasi uu yahay mid ka duwan shirarkii hore isla markaana dalka gudihiisa lagu qabanayo sidii ayaaha ummada Soomaaliyeed looga tashan lahaa, halka markii hore dibadaha shirar loogu qaban jirey.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in shirkaasi qodobada looga hadlayo ay ka mid yihiin sidii loo dhimi lahaa tirada baarlamanka, isla markaana looga gudbi lahaa nidaanka qabiilka oo loo gaari lahaa qaab deegaan, sidoo kale qodobada shirka waxaa kale oo ka mid ah ayuu tiri in la dhiso dawlad goboleedyada kale ee dalka si loogu gudbo nidaam dawladeed oo dhameystiran, arimaha dastuurka & qodobo kale.
Dhinaca kale waxaa maanta isaguna ka dhoofay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caali iyo wafdi uu hogaaminayo waxaana wararku sheegayaan in wafuudan uu shirku haatan u xayiran yahay oo lala sugayo in uu si rasmi ah u furmo.